‘महासंघमार्फत् राजनीतिक प्रोफाइल बनाउने काममात्रै भयो’ – Hacked by suliman_hacker
‘महासंघमार्फत् राजनीतिक प्रोफाइल बनाउने काममात्रै भयो’
Published on ८ मंसिर २०७३, बुधबार १६:१६ | by किरातसंसार
आसन्न नेपाल आदिवासी जनजातिको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा हुँदैछ । आगामी २ पुसदेखि सुरु हुने महाधिवेशनसँगै नयाँउम्मेदवारको चर्चापनि सतहमा आउन थालेको छ । यस्तैमा राईहरुको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाले आफ्नो केन्द्रीय सदस्य सर्वधन राईलाई अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारेको छ । यद्यपि, उनी यायोक्खाको तर्फबाट पहिलो अध्यक्षका आकांक्षी होइनन्, यसअघि सुनिल राई(छैठौं महाधिवेशन), राजबहादुर राई(सातौं महाधिवेशन), चन्द्रविक्रम राई(आठौं महाधिवेशन)मा अध्यक्षका उम्मेदवारी थिए । उनीहरु सबै अन्त्यमा पराजित भएका थिए । यसपटक फेरि यायोक्खाले सर्वधन राईलाई अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा खडा गरेको छ । उनैसँग किरातसंसारका लागि सुकदेव चामलिङले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आसन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी र दाबेदारी केका लागि?
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आबद्ध सम्पूर्ण जातीय संघसंस्थालाई एकतामा ल्याउन आजको आवश्यकता छ । साथसाथै, हकअधिकार, पहिचान र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरालाई संस्थागत विकास गर्न पनि जरुरी छ । यसका लागि किरात राई यायोक्खा सक्षम छ । जसले मलाई अध्यक्षको उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । र, आदिवासी जनजातिको अधिकारसँग सम्बन्धित आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न पनि मेरो उम्मेदवारी दिएको हुँ । यस अतिरिक्त जिल्लातिर आफ्नै कार्यालय भवन निर्माणसँगै अन्य जातीय समुदायको भवन निर्माणका लागि पनि म अध्यक्ष हुन जरुरी छ ।
यसभन्दा अघि यायोक्खाले उठाएका उम्मेदवारहरु पराजित भएको इतिहास छ । फेरि तपाईंलाई उम्मेदवार खडा गरिएको छ । यसपटकचाहिँ विजयी हुने सम्भावना छ र?
एउटा संगठनमा हुने चुनावी प्रक्रिया वा पहलमा कसैले जित्ने चर्चा चल्नु नौलो होइन । तर, सधैंभन्दा यसपटक एकदम सहज ढंगले विजयको सम्भावना छ । विजय हुने सम्भावना भएकैले यायोक्खातर्फबाट मेरो उम्मेदवारी दिएका हौं । यायोक्खाले अध्यक्षमा जित्नुपनि पर्छ । जबसम्म यायोक्खाले अध्यक्ष पद प्राप्त गर्न सक्दैन तबसम्म उम्मेदवारी रहन्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया जारी रहन्छ ।
यसपटक पनि यायोक्खाका उम्मेदवारले महासंघमा अध्यक्ष नजिते उम्मेदवारी दिइरहने हो ?
पटक–पटक यायोक्खालाई समूहगत रुपमा पराजित गर्दा आन्दोलनपनि कमजोर भएको महसुस सबैले गरेका छन् । यसकारण यसपटक यायोक्खाको उम्मेदवारलाई महासंघमा विजय गराउनु पर्छ भन्ने सबै जातीय संगठनहरुको मत र प्रतिबद्धता रहेको छ ।
हो । यायोक्खाले अध्यक्षमा नजितेसम्म उम्मेदवारी दिइरहन्छ । त्यो एउटा स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, यसैपटक यायोक्खाले महासंघमा अध्यक्ष जित्दैछ ।
तपाईं निश्चित हुनुहुनुन्छ?
अँ निश्चित छु ।
जित्ने आधारहरु के छन् त्यस्ता?
महासंघका सबै साथीभाइ र विभिन्न जातीय संगठनका प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको छ । उहाँहरुले पनि समर्थन गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुले भनिरहनु भएको छ, ‘यसपटक राईलाई दिनैपर्छ, उम्मेदवार पनि ठीक छ । समय पनि दिन सक्नुहुन्छ । लामो समयदेखि राई समुदायबाट आदिवासी जनजातिको मुद्दामा निरन्तर लडिरहनु भएको व्यक्ति पनि आउनुभएको छ ।’ अझ यसभन्दा अगाडि पटक–पटक यायोक्खालाई समूहगत रुपमा पराजित गर्दा आन्दोलनपनि कमजोर भएको महसुस सबैले गरेका छन् । यसकारण यसपटक यायोक्खाको उम्मेदवारलाई महासंघमा विजय गराउनु पर्छ भन्ने सबै जातीय संगठनहरुको मत र प्रतिबद्धता रहेको छ ।
तर, महासंघको निर्वाचनमा सुरुमा जे हुन्छ, अन्त्यमा राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ हावी हुँदा परिणाम उल्टिने गरेको छ । यसपटक पनि त्यस्तो होला नि त?
यो ठीकै हो । यसअघि दुई–तीन पटकको अधिवेशनमा पनि भएको छ । राजबहादुर राईलाई यायोक्खाले उम्मेदवार उठाउँदा पनि यो भएको हो । उहाँ त्यसबेला चार मतले मात्रै पराजित हुनु भएको थियो । त्यसबेला यायोक्खाको ‘इक्सरसाईज’ अलिकति नपुगेको हुन सक्छ । यस्तै, चन्द्रविक्रम राईको पालामा पनि त्यस्तो भयो । तर, आदिवासी जनजातिले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी आन्दोलन गर्छौ र हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्नुछ भने हामी एकजुट हुनु पहिले जरुरी छ । यसकारणले गर्दा यायोक्खाको उम्मेदवारलाई यसपटकको महाधिवेशनमा निर्वाचित गर्नुको विकल्प छैन ।
महासंघमा पार्टीको कुरा उठाएर आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको सवाललाई गौण बनाउने काम गरिनु हुँदैन । किनभने हामीबीचको एकता अपरिहार्य छ । हामी सचेततापूर्वक एकजुट भएमा यसबेला हाम्रा अग्रज आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुको प्रयत्नबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बढ्न सकिन्छ । अन्यथा, ती सबै गुम्ने र आदिवासी एकता कमजोर हुने देखिन्छ ।
अहिले पहिचानको बहस जारी नै छ । पहिचान पक्षधर र विरोधीबीचको ध्रुवीकरण छ । राजनीतिक आस्थाकै कारण महासंघको निर्वाचनमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
स्पष्टतः पर्दै–पर्दैन भन्न सकिन्नँ । किनभने अन्य उम्मेदवारका आकांक्षीहरुको कुरा सुनेको छु, विभिन्न पार्टीबाट अनेक कुरा आइरहेका छन् । तर, मेरो भनाईचाहिँ महासंघमा पार्टीको कुरा उठाएर आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको सवाललाई गौण बनाउने काम गरिनु हुँदैन । यहीँ कुरा सबैलाई भन्दै आएको पनि छु । किनभने हामीबीचको एकता अपरिहार्य छ । हामी सचेततापूर्वक एकजुट भएमा यसबेला हाम्रा अग्रज आदिवासी जनजाति अभियन्ताहरुको प्रयत्नबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बढ्न सकिन्छ । अन्यथा, ती सबै गुम्ने र आदिवासी एकता कमजोर हुने देखिन्छ । यसैले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिबीचको एकता अपरिहार्य छ । उहाँहरुले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ ।
हिजोका दिनमा हामीबाट केही कमीकमजोर भएको छ । त्यसकारण आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग जोडिएका आन्दोलनहरु कमजोर देखियो । त्यसमा राजनीतिक कारण पनि देखियो । यसैले यसअघि निर्वाचित भएकाहरुले राजनीतिक प्रोफाइल बनाउने तर आदिवासी जनजातिको हकअधिकारको लागि लड्न नसक्ने भएका थिए । यस्तो त देखिएकै पनि हो । यसकारण अबको अवस्था त्यस्तो सिर्जना गर्न दिनु हुँदैन । यसमा सबै आदिवासी जनजातिले सोच्न र बुझ्न जरुरी छ ।
नगेन्द्र कुमालको कार्यकालमा आदिवासी जनजातिहरु सबैभन्दा बढी ध्रुवीकृत देखिए । जसको प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा देखियो । अब सबैलाई एकताबद्ध ढंगले कसरी बढाउन सकिएला?
भोटलाई पैसामा किनबेच गर्यौ भने आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएर जान्छ । र, हकअधिकार भन्ने शब्दको पनि मृत्यु हुन्छ । त्यसखाले हर्कतले हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ र एकताबाट टाढिँदै जानेछौं ।
यसमा सहज तरिका छ । र, हामीले सबै आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित बनाउने सन्दर्भमा उनीहरुको मनोभावनालाई सँगै लैजान जरुरी छ । यसको लागि हामीबीच आपसी छलफल जरुरी छ । यो एकपटक होइन, पटक–पटकको छलफल र बहसबाट सम्भव छ ।
व्यक्ति फरक हुनेबित्तिकै उनको विचार पनि फरक हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । विचार फरक भएजस्तै व्यक्तिको समुदायगत संस्कृति पनि फरक हुन्छ । संस्कृतिसँगै पहिचान पनि फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । यसकारण उनीहरु सबैको विचारको सम्मान गर्दै उनीहरुले चाहेको कुरामा साथ दिएर सँगै लडेमा एकढिक्का बन्न सकिन्छ । यसले मात्रै हामीले चाहेजस्तो हकअधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं ।
महासंघको निर्वाचनमा पैसाले मत किनबेच हुने गर्छ । जसले गर्दा मुद्दा बोक्ने उम्मेदवार पछि पर्दै आइरहेका छन् । यसपटक पनि त्यस्तो दोहोरिला नि त?
अहिलेसम्मचाहिँ मैले त्यो सुनेको छैन । तर, अरुले त्यस्तो पैसाको चलखेल गर्छन् भने मेरो जानकारीभन्दा बाहिरको विषय हो र म जान्दिनँ पनि । तर, मचाहिँ यस्तो पक्षमा छुँइनँ । किनभने भोटलाई पैसामा किनबेच गर्यौ भने आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएर जान्छ । र, हकअधिकार भन्ने शब्दको पनि मृत्यु हुन्छ । त्यसखाले हर्कतले हामीलाई नै कमजोर बनाउँछ र एकताबाट टाढिँदै जानेछौं ।
सर्वधन जनजाति महासंघमा अध्यक्ष उम्मेदवार